Raadi Dalxiiska Hindida | Meelaha Dalxiis ee ugu sareeya ee Hindiya
Waqooyiga Bariga Hindiya
Raadso Hindiya - Goobaha Dalxiiska ee India
Hindisaha Hindiya - Dalalka kala duwanaanshaha waa waddan lagu kalsoon yahay nolosha. Jidka iyo wadada kasta, alcove iyo qalfoofka ayaa leh muraayad aan si fudud loo seegin karin. Gobol kasta oo India ah waxay leedahay dhaqankeeda iyo caadooyinkeeda u gaarka ah oo siinaya jiilka tamarta leh. Hindisaha hodanka ah ee hodanka ah ee Hindiya ayaa ka faaidaystey in ay ku soo jiidato goobjoogayaasha laga soo wato caalamka oo dhan. Buuraha barafka ah, harooyinka quruxda badan iyo xeebaha, muuqaalada qalin-jilicsan, calaamadaha dhismaha ee naqshadeynta, caqabadaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo wixii la mid ah ... wax kasta oo aad u malayn karto inaad ku sahamiso Hindiya. Baakadaha dalxiiska Hindiya ayaa si gaar ah loogu talagalay in ay sahamiyaan kala duwanaanshaha.
Meel-hoosaadka Hindiya waxay si fiican u sahlanaan karaan gobolka.
Waqooyiga Hindiya: Goobta safarka, Waqooyiga Hindiya waxay leedahay wax badan oo ay ku deeqaan, oo ku habboon saldhigyada buuraha soo jiidanaya ee meelaha diimeed. Meelo la dhisay macbadyo qadiimi ah, harooyinka shimmering, dhulalka xusuusta leh, dhirbaaxo cajiib ah, Waqooyiga Hindiya waxay damaanad qaadaysaa munaasabad balaaran martida.
Bariga Hindiya:Goobta xukunka ee xagjirnimada badan ee ka soo horjeeda, Bariga Hindiya waxay leedahay dhaqan qowmiyadeed iyo diin diineed. Meelaha Iconic & macbadka quruxda badan, xarumaha buuraha iyo jardiinooyinka shaaha, dabiiciga dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo daaqadaha dhuxusha, durdurrada iyo xeebaha aan lakulmeen ayaa ah baxsi ku haboon shirkadaha ganacsiyada leh.
North East India:Dalalka ugu yar ee sahlan, sahan ee waqooyi-bari waa wax aan la ogeyn oo ah meel qarsoodi ah oo soo booqda. Runtii waa samada aan la ogeyn. Wareegtada buuraha aan la taaban Karin ee dooxada Himalayas, Waqooyi Barri Hindiya ayaa ah kuwa ugu yar ee la baaray, adduunyo kale iyo meel kale oo ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Hindiya.
Galbeedka India:Rich ee taariikh, ruuxaani, kala duwanaanta iyo dhaqanka, Galbeedka Hindiya waxay bixisaa kala duwanaansho kala duwan ee safarka ku habboon meesha. Meelahan waxay ku dhex jirtaa shilalka raadiyaha, quruxda leh xarumaha buuraha, safarada hareeraha, Boqortooyada boqortooyooyinka boqortooyada, dhaqamada firfircoon, xarumaha xajka, muqadaraadkii hore iyo noloshii dabiiciga ahaa.
Koonfurta India:Koonfurta Hindiya waa xirfad leh wax kasta oo baaritaanka booqdaha loogu talagalay. Waxay leedahay saldhigyo quruxsan oo qurux badan, dib-u-dhaqaaleyn, goobaha duur-joogta ah, dhismayaasha taariikhda qadiimiga ah, shimbiraha hareeraha leh, boodhooyinka quruxda badan iyo hareeraha guryaha.
Hindiya Dhexe:Central India, oo loo yaqaano kala duwanaanta kala duwan, waa xarun duurjoogta ah iyo beeraha qaranka. Ka sokow duur joogta ah, waxay leedahay hanti iyo heeso cajiib ah, gobollada qabaa'ilka, hudheellada caanka ah, iyo goobaha qadiimiga ah ee gaboobay; Dhab ahaantii bartamaha Hindiya waxay bixisaa dadka soo booqda xayndaab jimicsi ah.
Xulo mid ka mid ah noo Bandhigyada Dalxiiska India si aad u sameysid fasaxaaga mid xusuus leh.
Goobta Dalxiiska ee Hindida
Waqooyiga Hindiya Tours